स्वास्थ्य – Nepal24News
सामान्यतः बाथको समस्या बढी महिलालाई देखिन्छ भने पुरुष पनि यसका शिकार हुन्छन् । बाथ हुँदा जोर्नी दुख्छ र सुन्निन्छ । यसका लागि उपचार र पेनकिलर्स दिइन्छ । तर अनुसन्धानहरुबाट के देखिएको छ भने यदि बाथ बढाउने खालका खाना खाइएको छै भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बाथ धेरै प्रकारका हुन्छन् । तिनमा ओष्टियो बाथ र रुमाटाइड बाथ बढी भएको पाइन्छ । ओष्टियो बाथ औंला, घुँडा तथा हिपमा हुन्छ भने रुमाटाइड बाथ खुट्टाको जोर्नीमा हुन्छ । यसले ती अंग चलाउन पनि गा¥हो हुन्छ । परिवारमा पहिला कसैलाई बाथ भएको छ भने यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथको लक्षण जोर्नी दुख्ने सुन्निने अंगले काम गर्न समस्या हुने रातो हुने के गर्ने ? आराम गर्ने चिसो या तातोले सेक्ने तौल कम गर्ने शारीरिक अभ्यासमा जोड दिने जोर्नी प्रत्यारोपणको उपचार यसका अलावा बाथका रोगीले यी खाना खानबाट बँच्नुपर्छ फ्रा
काठमाडौं -स्थानीय स्तरमा यत्रतत्र पाइने तितेपाती औषधीको काम मात्र होइन धार्मिक कार्यमा समेत उपयोगी हुने गरेको छ । बास्नादार यो खाने भन्दा पनि शरिरका बाहिरी अङ्गमा प्रयोग गर्न बढी लाभदायक मानिन्छ । तितेपातीको प्रयोग लुतो घाउ खटिरामा यसको पात माडेर ताजा रस लगाउनाले लुतो निको हुन्छ । कपालको चाँया हटाउन तोरीको पिनासँग मिसाएर लगाए लाभदायक हुन्छ । सुगर रोगीले यसको जराको पाउडर बनाएर बेलुकी सुत्ने बेला चिया चम्चाले आदी चम्चा चिसो पानीमा सरासर ७ दिन सम्म खाएर बन्द्य गर्ने र चापेको महशुस भएपछि फेरि सुरु गर्ने गरेमा राम्रो हुन्छ तर यसलाई खाली पेटमा खानुु हुदैन ।जुका चुर्ना परेमा यसको जराको पाउडर बनाएर आदी चम्चा गिलास पानीमा भिजाएर विहान पानी सहित खानाले पेटको जुका मर्छ । विशेष गरी तितेपातीलाई किटनाशक र एलर्जी हटाउने औषधीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन तितेपातीलाई कूल पूजा प्रेम्त क
काठमाडौं । थायराइड मानव शरीरमा पाइने एंडोक्राइन ग्लैंडमध्ये एक हो । थायरायड ग्रंथि गर्दनमा श्वास नलीभन्दा माथि स्वरयन्त्र दुबै भागमा रहेको हुन्छ । यसको आकार पुतलीको आकारमा हुन्छ । यसले थाइराक्सिन नामक हार्मोन बनाउँछ । जसले शरीरको ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोनमा हुने संवेदनशीलतालाई नियन्त्रित गर्छ । सुरुवाती दिनमा सरल रुपमा थायराइडको कुनै पनि लक्षण थाहा हुन नसक्छ । यसको पहिचान हुँदासम्म यसले ठूलो रुप लिइसकेको हुन्छ । कब्जियत थाइराइड हुँदा कब्जियतको समस्या हुने गर्छ । खाना पचाउन समस्या हुन्छ । खानेकुरा सजिलै निल्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा शरीरको तौलमा असर गर्छ । हातखुट्टा चिसो हुनु थाइराइड भयो भने व्यक्तिको हातखुट्टा चिसो हुने गर्छ । मानव शरीरको तापमान सामान्य यानी ९८.४ डिग्री फारेनहाइट (३७ डिग्री सेल्सियस) हुन्छ । तै पनि व्यक्तिको शरीर चिसो हुने गर्छ । प्रतिरो
आजभोली मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढि रहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा त्यति ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीजहरु यस्ता हुन्छन् । जस्को प्रयोगले तौललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि तौल घटाउन तपाइँ धेरै मेहनत गर्न सक्नुहुन्न भने तपाइँलाई आज हामी सजिलो उपायबारे जानकारी दिन्छौं । निम्न उपाय अपनाई तपाइँले आफ्नो तौल घटाउन सक्नुहुन्छ: १) धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्यपदार्थ त्याग्नुहोस् । चीनी , आलु र चामलमा कार्बोहाइड्रेट बढि हुन्छ । यस्ले बोसोलाई बढाउँछ । २) गहँुको रोटि मात्र खानुभन्दा गहँु, भटमास र चना मिश्रित आटाको रोटि धेरै फाईदाजनक हुन्छ । ३) दिनहुँ बन्दागोभीको जुस पिउनुहोस् । बन्दागोभीमा बोसो घटाउने गुण हुन्छ । यस्ले शरीरको मेटाबोलिज्म ( शरीरको रासायनिक परिवर
एजेन्सी । बालबालिकाप्रति माया देखाउनको लागि हामीले चुम्बन गर्ने गर्छौं । पहिले सामान्यतयास् बच्चाको गालामा चुम्बन गर्ने गरिन्थ्यो भने, अहिले बालबालिकाको ओठमा चुम्बन गर्ने चलन बढ्दो छ। तर तपाईंले यदि आफ्नो बच्चाको ओठमा चुम्बन गर्नुहुन्छ वा अरुलाई चुम्बन गर्न स्वीकृति दिनुहुन्छ भने तपाईंले बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै हुनुहुन्छ। सन् २००१ मा एक जना ब्रिटिश महिलाले आफ्नो शिशुको तस्बिर सामाजिक संजालमा राखेकी थिइन्। उक्त तस्बिरमा उनको बच्चाको मुख र अनुहारमा भयावह संक्रमण देखिन्थ्यो। उनका अनुसार एक जना महिलाले बच्चाको ओठमा चुम्बन गरेकी थिइन्। उक्त चुम्बनको माध्यमले ती महिलामा भएको हर्प्स सिम्प्लेक्स भाइरस बच्चामा सरेको थियो, जसले गर्दा बच्चा त्यो स्थितिमा पुगेको थियो। उक्त भाइरस आफूमा भएको बारे महिला आफै अनभिज्ञ थिइन्। त्यस्तै २०१३ मा आफ्नै बाबुको चुम्बनले गर्दा बच्चामा संक्रमण भए
काठमाडौं । रोबोटसँग सुत्ने कुरा आफैंमा अनौठो लाग्छ । यसबाट तपाईंको पार्टनर रिसाउन सक्छन् ।यो यस्तो रोबोट हो, जसले तपाईंलाई गहिरोसँग निदाउन मद्दत गर्छ । यो विश्वको पहिलो ‘स्लिप रोबोट’ हो । यसको नाम हो- सोम्नक्स । यो वास्तवमा मानवजस्तो नभइ बदाम आकारको सिरानीजस्तो छ । तर, यसले मानिसको जस्तो अनुभूति दिलाउँछ । सोम्नक्सले तपाईंलाई निदाउन सहयोग गर्नेगरी श्वासप्रश्वासमा सहयोग गर्छ । यसलाई तपाईंले काखमा राखेर सुत्नु हुन्छ । रोबोटमा भएको बटन थिचेपछि यसले श्वासप्रश्वास लिन थाल्छ । विद्युतको प्रवाह नियन्त्रण गर्न रोबोटमा नरम भाग हुन्छ, त्यसले श्वास तान्ने र फ्याँक्ने काम गर्छ, श्वासप्रश्वास गरेजसरी नै । तपाईंसँग रहने कुनै मोबाइल सेटको एप्लिकेसनमा रोबोटबाट कति समयमा कति समयसम्म श्वासप्रश्वास गर्ने भन्ने ‘सेट’ गर्न सक्नुहुनेछ । रोबोटसँग सुत्दा तपाईंलाई आफ्नै पार्टनरसँग सुतेको अनुभूति हुनेछ ।
उमेर छँदै देखिन थाल्यो सुगरको समस्या ? सुगर जरैदेखि निर्मुल पार्न यसरी विधि पुर्याएर सेवन गर्नुहोस् मेथिको साग
काठमाडौं । हिजोआज विभिन्न कारण दिन उमेरमा नै सुगर, बाथ, प्रेसर, लगायतका रोगहरु देखि थालेका छन् । यस्ता समस्या सामान्य जस्तो लाग्ने भएपनि यिनले मानिसको आधा प्राण नै लिन्छन् । जब यि रोगले गाँज्दै जान्छन् तब स्वास्थ्य दिनानुदिन प्रतिकुल बन्दै जान्छ । यस्ता रोगहरुमध्ये आज हामी सुगरको समस्या र त्यसका निधनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । आजको रिर्पोट बनाउने क्रममा हामीले विभिन्न भारतीय अनलाइन तथा भिडियो तथा चिकित्सकहरुको सल्लाह र सुझावलाई मुख्य आधार मानेका छौँ । जसमा मुख्य रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने घरेलु सामानहरु औषधिको रुपमा समेत प्रयोग हुन सक्ने कुराहरुलाई हामीले समाधानका रुपमा प्रयोग गरेका छौँ । जस्तै, तरकारी, अचारमा प्रयोग गरिने मेथीलाई हामीले सुगर कन्ट्रोलको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । सुगर कन्ट्रोलको औषधीका रुपमा मेथीको विशेष भूमिका हुन्छ । एक चम्चा मेथीलाई ओखलमा वा मिक्सरमा राखेर एक गि
मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकी देखा पर्छ । थुप्रै मानिस हरेक वर्ष एक दुईपटक रुघाखोकीको प्रकोपमा पर्छन् । दुई सयभन्दा बढी प्रकारका भाइरसबाट हुने यो रोगलाई सामान्य रोग मानिए पनि यसले निकै सताउँछ। रुघाखोकी सामान्यतया केही दिन वा हप्तामा आफैँ निको हुने गर्छ । त्यति ठूलो उपचारको जरुरत पनि पर्दैन । तर, मानिसलाई यसबाट छिटो उन्मुक्ति पाउन खोजिरहेको हुन्छ । किनकि, यसले दैनिक काममा पनि अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । घरमा अपनाइने केही सावधानीले यस्तो अवधिलाई छोट्याउन पनि सकिन्छ । जुन धेरै हदसम्म खानामा निर्भर हुन्छ । रुघाखोकी हुदा यसो गर्नुस् : .रुघाखोकी लक्षण देखिनासाथ तातो पानी सेवन गर्ने । .सुत्ने बेलामा पैतलामा तोरीको तेलले मालिस गर्ने । .अदुवाको रस आधा चम्चा, तुलसी पत्रको रस आधा चम्चा र एक चम्मा महसँग मिसाएर दिनको तीन पटक सेवन गर्ने । .अदुवा र बेसार हालेर पकाएको पानीले बिहान, दिउँस
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिलले एकदिन कुराकानीका क्रममा भनेका थिए– एकजना महिला डाक्टरले कार्डियोलोजीमा डिएम गर्नुभएको छ । मेरो अनुमानमा मुटुरोगमा डिएम (पिएचडी सरह) गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली महिला हुनुपर्छ ।’ मैले ‘हो र?’ भन्दै जिज्ञासु प्रतिक्रिया दर्शाएको थिएँ । कुराकानी गर्ने चाहनाका साथ डा भवानी मानन्धरको नम्बर टिपेको थिएँ । मुटुरोगमा पिएचडी सरह भन्नेबित्तिकै दिमागमा डा भवानीको एउटा चित्र बनेको थियो । मेरो दिमागको त्यो चित्रमा डा भवानी अलि पाको उमेरकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि फोन गरेर म उनलाई भेट्न ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल पुगें । तेस्रो तल्लामा रहेको कार्डियोलोजी विभागमा डा भवानी मानन्धर लेखिएको नेमप्लेट पछ्याउँदै गएँ । ढोका बन्द थियो र आफू आएको जनाउ दिनु थियो । फोन गरें। कालो बुट्टादार लङकोट लगाएर भित्रबाट जो निस्किइन्, ती मेरो दिमाग बनेको अनुमानित तस्बिरभन्
Mar132018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनावश्यकरुपमा मोटाउनु राम्रो लाग्देन । त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो । हामी मोटोपनबाट मुक्त हुन विभिन्न अभ्यास गर्दछौं । तर यो कहाँ सजिलो छ र ? तर यहाँ तपाईको लागि एउटा यस्तो चामत्कारिक विधि छ, जुन घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीबाट तयार बनाउन सकिन्छ । यस्तो घरेलु उपचार पद्धतिले शरीरमा जम्मा भएको अनावश्यक बोसो तथा जलनलाई घटाउन काम गर्दछ । अझ खुसीको कुरा त यसले किड्नीको सफाई समेत गर्दछ । यसलाई तयार बनाउन तीन मिनेटभन्दा कम समय मात्र लाग्दछ । तसर्थ, अब भारीभरकम व्यायाम र मोटोपन दुवैबाट एकसाथ मुक्ति पाउन यो प्राकृतिक तरिका अपनाउनुहोस् । सामग्रीः केही ताजा धनियाँ, एक दाना कागती र आधा कप पानी तयार गर्ने विधिः एउटा भाँडामा कागतीको रस निकाल्नुहोस् र त्यसमा काटेर टुक्रा बनाइएको हरियो धनियाँ र आधा कप पानी राख्नुहोस् । त्यसलाई मिक्सरमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्, अ